Hiran State - News: HS:-Magaalada Mogdishu oo marti u noqoneysa ciidamadii ugu badnaa ee socda .
HS:-Magaalada Mogdishu oo marti u noqoneysa ciidamadii ugu badnaa ee socda .
HS:-Inkasta oo la saadaalinayey in xiligaan la ansaxiyo dastuurka lana guda galo soo xulista baarlamaanka cusub qaar ka mid ah dowladaha safka hore ayaa ku guulkeystay in ay odoyaasha dhaqanku xal ka gaari waayaan ergadii ansaxin laheyd dastuurka si loogu gudbo arimaha ay ugu horeeyaan xulista baarlamaanka cusub.
Soomaalida oo aad loo bartay dhaqankooda waxaa hada odoyaashii ku dhax jira sirdoon badan oo ka socda wadamo dano fog iyo kuwo dhaw ka leh dalka Soomaaliya iyadoo odoyaasha loola dhaqmo sidii qabqablayaashii dagaalka ee mid mid si gooyni ah wax loogu sheegi jiray iyagoo aan iska warqabina mid kasta idaacadaha iska imaan jiray isagoo sida uu jecel yahay ka hadlaya.
Hadaba markaad u guur gasho hab dhaqanka odoyaasha maanta loogu yeeray nabadoonada oo sida la ogyahay intooda badan hogaanka TFGda ay soo xusheen uma eka kuwo hal dhinac wax iskula wada oo maslaxada dalka isku si uma arkaan sida ay masuuliyiinta TFGduba ugu kala aragti duwan yahiin siyaasada maanta ka jirta dalka.
Laakinse marka xaalada dhinaca kale laga eego Soomaalida dhaxdeeda waxa ay isku mashquulineyso iyo beesha caalamka sida ay u dooneyso iney dalka galiso maxmiyad deg deg ah ma ahan wax isku dhaw.
Heerka ay siyaasada dunida maanta ka joogaan inta ku dhax jirta iyo habka ay doonayaan wadamadii waligood dunidan atooraha ka ahaa ee soo gumeystay wadamo badan ma ahan wax isku dhaw. siyaasiyiinta maanta jirta waxey ka dhamaan waayeen is qabqabsi dhexdooda ah markaad eegto waxa ay isku heystaane waa dano shaqsi mid guud ma jirto taana waxaa cadeyn u ah waxey ku murmayaan Mogdishu waa caasimad iyo dib haloo eego iwm. odoyaashii loogu yeeray nabadoonada beelkasta odoy ayaa u hadla isagoo ka hadlaya wax aysan ka warqabin kuwa beelaha kale ee kula xareysan xerada Xalane.
Arinta kale oo qatarteeda leh waa in madaxweynahii iyo wasiirkiisii 1aad dibadaha u aadeen safaro ay taageero kaka raadinayaan sidii uu midkasta dib ugu soo noqon lahaa siyaasada halka ay dalka ku maamulaan roadmap laga dhaxlay Kampala Acord.
Sikastaba dalka Soomaaliya oo ay ku sugan yahiin ciidamo kor u dhaafayo 15 kun oo African ah waxaa lagu soo darayaa 5 kun oo ciidamo boolis ah kuwaasi oo sugaya nabadgalyada caasimada Soomaaliya sida ay ku doodayaan wadamada daneeya arimaha Somaliya,halka ciidamada Soomaalida dibada looga saarayo guud ahaan Mogdishu.
· admin on July 07 2012 14:11:21 · 0 Comments · 1729 Reads ·
14,569,442 unique visits